DHAGAYSO:Muuse Biixi oo ka hadlay ciidamo cusub oo la sameeyey & Qorshe halis ah oo socda
July 22, 2020 Mahad Jama 3
HARGEYSA(P-TIMES)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay nabadgalyada Geeska Afrika, isagoona tilmaamay in ay soo dhowaynayaan cid walba oo Somaliland wax la qabsanaysa halka uu ka digay ciidamada loo samaynayo dalalka ku yaala biyaha Badda Cas.
Muuse Biixi ayaa sheegay in Somaliland aysan ogolaan doonin hadii aan lagala tashan dhismaha ciidamadaasi sida uu ka dhex shaaciyey munaasibad tababar loogu soo xidhayey ciidamo ka tirsan kuwa Booliska iyo Malateriga Somaliland.
Waxa uu sheegay in Somaliland ay u taagan tahay ilaalinta nabad galyada wadamada jaarka ah isla markaasna ay kasoo daashay dagaal iyo dhibaato ka dhacda gudaheeda taas badalkeedna ay ka shaqaynayso horumarinta nabad galyada.
“Anigu Somaliland hadaan nahay cid walba dantayadaan kula shaqaynaynaa iyo danta horumarka dalkayaga qof kasta oo nala shaqaysanaya oo aan wax wada qabsanayno diyaar baanu u nahay” Sidaas waxaa yidhi Muuse Biixi Cabdi.
Inkastoo madaxweyne Biixi uusan soo hadal qaadin dal gaar ah hadana waxaa uu ka hadlay ciidamo la sheegay in loo sameeyey dalalka dhaca Badda Cas, kuwaas oo uu sheegay Muuse Biixi in dalalka sameeyey ciidamadaasi aysan Somaliland cidi u matalayn.
Dalalka samaystay ciidamada iyo ujeedka Somaliland ay ku diidan tahay ciidamadaasi ayuu si gaar ah uga hadlay, waxaana uu sheegay Biixi in Somaliland ay isku filan tahay difaac ahaan dhan walba waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Dowladdaha Badda Cas ee la yidhi wax buu samaynayaa ciidan difaac ah ee magacyaasha badan ee shanta dowladood ah waxaan cod dheer u sheegaynaa baddayada iyo barigayaga anagaa difaacanayna cidaan nagala tashana iman mayso kana yeeli mayno” Ayuu yidhi hogaamiyaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Hadalka Biixi ayaa kusoo beegamaya xili dhawaan heshiis uu dhex maray dowladda Taiwan iyo Somaliland, iyadoona magaalada Hargeysa ay soo gaadheen xubno ka socda dowladdaha Masar iyo Itoobiya oo xidhiidh saaxiibtinimo ah la sameeyey Somaliland.
Dadka Somaliland la baxay,waa wayb ka mid ah,dadwaynaha Soomaaliyeed ee degen gobolada waqooyi ee Soomaaliya,war wabiil shaki kuma jiro inuusan noqonayn qaran,waxaa loo sheegay in beesha dhexe ee Soomaaliyeed ee ka mid beela halkaa dega,in aysan waqti isga lumin dal iyo dowlad ka madax banaan Soomaaliya ayaano nahay,taaso waa been,waxaad ogaatiin in Soomaaliya aan cidina kala googooyn karin,ee war Biixiyow dadkaaga Soomaaliyeed dhinaca ka raac,wada kasta waa ay idinka soo xirantay ,sha Soomaaliyeed ee halkaasi aad ku haysaan oo aad go’doomiseen war ka hor leexda oo iyago ha doorteen waxa rabaab,beenta iyo nacayb u burka ka daaya.
Soomaaliya ha midowdo oo qaranimadeeda la ma taabtaanka ah ha guulaysato.
Idoor wa ducufo waxay kunoolyihiin wa dulqaadka umada somaliyeed.